Tanora · Desambra, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Tanora · Desambra, 2014
Tantara mikasika ny Tanora tamin'ny Desambra, 2014
Azia Atsimo26 Desambra 2014
Azia Afovoany sy Kaokazy19 Desambra 2014
Serbia18 Desambra 2014
Taorian'ny nahafatesan'i Tijana Jurić, tovovavy 15 taona, dia atosik'ireo olom-pirenena ny governemanta Serba mba handàny ny lalàna iray izay afaka hanome fahafahana ny polisy hikaroka avy hatrany sy amin'ny fomba mahomby ireo tanora tsy ampy taona tsy hita.
Amerika Latina17 Desambra 2014
Karaiba12 Desambra 2014
Miteraka zavatra tsara eo amin'ny fiainan'ny tanora ao Grenada sy ny fahaizana mamaky teny ny fijoroan'ny tranomboky Mt. Zion ao afovoan'i St. George's.
India: Ry Bavy ‘Fahasahiana’ Mamaly Bontana An'ireo Màmbam-Piraisana Ara-Nofo
Azia Atsimo09 Desambra 2014
Noho ny fiarovan-tena tamim-pahatoniana nataon'izy ireo, noderain'ny olona nanerana an'i India ho toy ny ohatra mivaingana amin'ny fomba tokony hananan'ny vehivavy hery sy tanjaka hanohitra ireo mpanao ankeriny i Rohtak sy Pooja.
Sisan-taolana Voamarin'ireo Manampahaizana Mpikirakira Faty Ho An'ny Iray Tamin'ireo Mpianatra Nanjavona Tao Ayotzinapa
Amerika Latina08 Desambra 2014
Voamarin'ireo manmapahaizana mpikirakira faty fa an'i Alexander Mora Venancio, 21 taona, iray amin'ireo 43 nanjavona, ireo sisan-taolana hita tany anaty fanariam-pako tao an-tanànan'i Cocula.
Handany Samirery Ny Alin'ny Krismasy? Manana Ny Ambarany Ny Japoney
Azia Atsinanana07 Desambra 2014
Tao am-piasàna, sondriana ery ireto tanora mpiara-miasa nifampitafa mikasika ny lamina hiatrehana ny kuribotchi. "Fa inona marina aloha ilay atao hoe kuribotchi?" Hoy aho sady nikakakaka no nanontany. Fahanginana hafahaha no setriny